Maxaan ka ognahay hawlaha shaqo ee horyaal golaha shacabka oo weli la daala-dhacaya guntin la’aanta kulamada? – Kalfadhi
Maxaan ka ognahay hawlaha shaqo ee horyaal golaha shacabka oo weli la daala-dhacaya guntin la’aanta kulamada?
Kulankii 20naad ee Kalfadhiga shannaad ee golaha shacabka baarlamanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa baaqday sabtidii toddobaadkan, waa kulankii labaad ee baaqda teer iyo markii goluhu shaqada ku soo noqday 15kii Juun; markii ay muddo u dhow labaatan cisho fasax jireen.
Mudadaas waxaa golaha u qabsoomay laba kulan oo keliya.
Gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa toddobaadkii hore sheegay in loo baahan yahay in xildhibaanadu ay fadhiyada yimaadaan si ay u sii socoto shaqada goluhu. Guddoonku wuxuu qaaday tallaabo kale oo xal loogu raadinayo maqnaanshaha xildhibaanada, waxaana la yeeriyay magacyada mudanayaasha aan fadhiyada soo xaadirin.
Kooramka goluhu wuxuu ku buuxsamaa 138 xildhibaan, sida uu dhigayo xeer hoosaadka.
Kalfadhiga shannaad oo furmay 27kii Maarso ayaa la filayaa inuu xirmo dabayaaqada bisha Luulyo. Laakiin golaha waxaa horyaal hawlo xoog leh oo u badan dhinaca xeer-dejinta kuwaas oo u muuqda in uusan ku filnayn wakhtiga uu haysto golahan oo weli la daala-dhacaya kooram la’aanta kulamada.
Gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa furritaankii sheegay in kalfadhigan ay golaha ay horyaaliin 11 sharci oo muhiim ah, kuwaas oo kala ah; Hindise sharciyeedka Maamulka iyo maaliyadda, dib u eegista xeerka saxaafadda, Maaraynta badroolka, hindise-sharciyeedka la dagaalanka argagixisadda, hindise-sharciyeedka Waxbarashadda Soomaaliya, Hindise sharciyeedka Istaastitikadda Soomaaliya, Naqshadaynta magaalooyinka, Qaanuunka shirkadaha, Bartilmaamaysiga cunaqabaynta dhaqaalaha, duulista rayidka iyo sadaasha hawadda iyo hindise sharciyeedka dib u eegista sharciga shaqaalaha rayidka ah ee dowladda.
Waxaa jira shuruuc kale oo deg deg ah oo xukuumaddu golaha u gudbisay bilhii Abriil iyo May, kuwaas oo goluhu ka dooday sida xeerka doorashooyinka.
Mudada uu xilligan fadhigu furnaa waxyaabaha ugu waa weyn ee qabsoomay waxaa ka mid ah; ansixinta heshiiskii Baydhabo ee madaxda federaalka iyo kuwa dowlad-goboleedyada oo ahaa wada-xaajood siyaasadeed oo lagaga heshiiyay arrimo ay ka mid yihiin khayraadka iyo doorashooyinka, heshiiska caalamiga ah dadka naafadda ah, xeerka shirkadaha ganacsiga iyo xeerka kale ee uu muranka badan ka taagan yahay ee shidaalka kaas oo dowlad-goboleedyada qaarkood ay sheegeen in aan talo laga gelin uusanna khusayn.
Gudoomiye Maxamed Mursal iyo ku xigeenkiisa Cabdiweli Sheikh Muudey oo gudoominaya shirka guddiga joogtada ah
Xog arruurin ay samaysay warbaahinta Kalfadhi waxay ku ogaatay in celceliska xildhibaanada soo xaadiray kulamada qabsoomay ay yihiin fadhigiiba 155 mudane. Taas waxa ay ka dhigan tahay in fadhi walba ay ka maqnaayeen ilaa 120 xildhibaan, iyada oo aysan kala cadeyn kuwa fasaxa ku maqan, iyo kuwa idan la’aan baaqday.